Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika haddii aysan isku qoslin Walee way isku ooyi donaan | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	10:20 am » WAR DEG DEG: Raa’isal Wasaare Saacid oo ka badbaaday mooshinkii laga keenay 8:33 am » Taliska Amisom oo markii ugu horeysay sheegay inaan wax hub ah lagu qaadan karin Magaalada Muqdisho 8:22 am » Wararkii ugu dambeeyay baabuur ay la socdeen Ciidamada Dowladda oo wadada loo galay 8:12 am » Itoobiyo oo cadeysay inaysan wax lug ah ku laheyn Siyaasada cakiran ee Magaalada Kismaayo 7:25 am » Raa’isal Wasaaraha oo maanta kawaanka saaran, lagana cabsi qabo in daaqada laga saaro 6:48 pm » Amaro adag oo markii ugu horeysay lagu soo rogay Magaalada Kismaayo (Aqriso) 5:56 pm » Dowladda Somaliya oo markii ugu horeysay ogaatay halkii laga soo tuuray madaafiicdii lagu weeraray Madaxtooyada 5:48 pm » Dowladda Australia oo sheegtay inay xiiseyneyso Deegaanada Puntland “Daawo Sawirada” 12:02 pm » Ciidamada Amisom oo ka qeyb qaatay hawlgal qorsheysan oo laga fuliyay meelo gaar ah, oo lagu soo qab qabtay niman Shabaab ah 11:53 am » Gabar ka tirsan Ciidamada Dowladda oo hal askari qaarajisay, iyadoo mid kalana dhaawacday By: Mastar // Jun 29 2012 at 4:53 pm // 1,225 Reads // Wararka Somalia Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika haddii aysan isku qoslin Walee way isku ooyi donaan Share Tweet
Marka ugu horeeyso oo qofka yimaado k/afrika wax yaalaha ugu hureyo oo maqlayo waxa kamid ah kalmada “la’isuma qoslo“, waana wixii ugu horeeyey oo la igu yiri markii aan imid k/afrika hal sano iyo bar ka hor , balse jawaab aan si lama filaan ah u bixiyey ayaa noqotey xaqiiq aan la iska indho tiri karin ,Jawaabta aan bixiyay ayaa aheed “hadii aan leysku qoslin waa la isku ooy doona”.
Kalimada ah la’isuma qoslo waxaa loola jedaa arxaan daro, abaal daro, isu nixid la’aan, iyo aan wax garab ah la isa siin, intaa kaliya kuma ekee waxa ay kalimadu xanbaarsantahay in la is dhibaateyo.
Ula jeedada aan u soo qaatay erayga ah ”La’isuma qoslo” ayaa ah in aysan Soomaalida wax naxariis ah aysan kujirin qofba dantiisa kaliya uu fiirsado, micnaha la’isuma qoslo ayaa ah in wax farxad ah uu san ku muujin sida qofka sxbkaa ah ama qaraaba aa tihiin taa ayaa keentay in aan la’isu qoslin k/afrika.
Markii aan soogaaray wadanka K/Afrika qofkii ugu horeeyey oo aan la kulmay waxa uu ahaa saaxiibkeeyga qaali ah, salaan kadib ayuu waxu igu dhahay saaxiibkeey Codeeyoow dalkani Koonfur Afrika “La’isuma qoslo” .
Jawaabta isla markaas aan kabixiyay ayaa noqotay “Haddii aanan la’isu qoslin waa la’isu ooyn doonaa” oo aan ugala jeedo hadii aadan walaalkaa maanta adan garab siin bari marka uu dhinto ayaad barooran doonta ama ooy doonta.
Marka aad dhax marto magaaloyinka waaweyn ee wadanka waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaali ah oo nolosha ka dhacay oo jiifta gidaarada, jooga meelaha qamriga lagu iibiyo, maqayadaha qaadka lagu cuno, xafada Soomaalida ku badantahay , marka aad qaarkood waraysato waxa ay kaaga sheekeynayaan garab la’aan ay kala kulmeen walaalo halkan oga soo horeeyey, iyo waliba dhibaatooyin loo geystey, kuna kalifey in ay nolosha ka dhacaan.
Mid kasta oo dadkani ka mid ah markii uu dalkani soo galayay waxa uu lahaa hami sare oo ah in uu wax tabcado, ehelkiisa wax u taro, noloshiisana wax u qabto.
Marka aad maqasho ereyga la’isuma qoslo durbaba waxa maskasdaada kusoo dhacayso Tallow maxa la’isugu qosli waayay ?. Micnaha erayga aan u soo qaatay ayaa ah K/Afrika in aysan wax naxariis ah aysan kajirin .
Sida aan soo sheegey kaliya ma ahan in aanan la’isu naxariisanin oo aanan garab la’isa siinin, ee sidoo kale dadke dhexdooda waa kuwa is dhibaateeya, waxaan tusaale usoo qaadan karaa dhacdo xanuun badan oo kadhacday magaalada Port Elizabeth taa oo ah nin walaalkiis cad cad u jar jaray , oo inta god u qodey ku ridey hilbihiisa kadib markii ay isku qabsadeen dukaan ay shirko ku ahaayeen. Waxaa jira boqolaal dhacdo kale oo tani la mid ah ama ka agdhow oo dad Soomaali ah isku dileen, ama si kale isu dhibaateeyeen oo ay ka mid tahay in xitaa tuugo isu adeegsadeen.
Soomaalida kunool wadanka K/Africa ma ahan dad dabka kala qaata mana ahan dad isjecel inta badan, tusaale ahaan haduu qof Soomaali ah daganyhay hal xaafad majira gof ku dhiiran karo inuu kasoo ag dhawaado sidii isaga oo xaafada dhan isaga leh, sababta ayaa ah in kaligii cune yahay ama uu san wax jaceyl ah uusan u qabin qofka walaalkiis ah.
Waxaa uu jaceylyahay in uu kaligii daganaado xafadaas si uu u helo kalyanti badan oo u soo dukaameeyso dukankiisa kaliya, tana waa mid kamid ah cadoow tinimada iyo isxaan daro la’aanta ka dhaxjira Soomaalida K/Africa .
Markii aad soo gaarto wadankaan k/afrika waxaa lagugu soo dhaweynaya waji farxad leh, iyo qosol aanan bishimaha dhaafsiisanayn, laakiin labo maalin kadib waxaa dhagahada ku soo dhacaya waaba haddii ad maqashay erayga la’isuma qoslo.
Xaqiiqda aan arkay ayaa ah in maalinkasta dadka ay u ooyaan qof walaalkood ah oo lagu diley dalkani, ama lagu dhaawacay, lagu gubey ama lixdiisa lixaad ku waayay.
Qosolka waa sheeyga aduunka ugu qaalisan misane aanan lacag lagu kala iibsanin, waxa uu furaa qalbiyada, waxa uu isu soo dumaa niyadda dadka, waxa uu dadka ka dhex abuuraa jacayl kaasoo keenaya wadajir iyo midnimo, maahmaahdii caanka ahayn waxa ay ahayd “gacmo wadajir beey wax ku gooyaan”. Sidaasi darteed waxaan leeyahay yaanan laga tagin naxariista iyo in la’isu qoslo.
Soomaalida ku Nool magalada Polokwane ee Gobolka Limpopo oo cabsi xoogan ay so wajahday kadib markii….? Nin Soomaali ah oo noqdey Afrikaankii ugu horeeyey ee madax ka noqda Red Cross Qiso Xanuun badan:Jirkaaga ii hibeey ayuu i dhahay hadaad i jeceshahay ana waan isku dhiibay mana i guursan!!! Dowladda Maraykanka oo loo heysto magdhow $9 milyan ah naaquude lagu diley Soomaaliya Sheekada Jimacaha iyo Shan Kiilo Cune oo Xaaskiisa isku dhaceen!!! Wariyeyaasha Muqdisho qaarkood heybadii saxaafadeed malahan iyo Talo aan ujeediyey (Warbixin Kooban) Saraakill cusub oo Jabuuti Tababar kusoo qaatay oo maanta Magaalada Muqdisho saa gaaray + sawirohelin. Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments